YH HYDRAULIC - Shirkadda Xirmooyinka Shidaalka ee China, Farsamooyinka Tamarta, Warshadaha Kombiyuutarada
E-mail: iibinta2@yhhoseassembly.comTel: + 86-15824530883 Select LanguageAfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengaliBosnianBulgarianCatalanCebuanoChichewaChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFilipinoFinnishFrenchFrisianGalicianGeorgianGermanGreekGujaratiHaitian CreoleHausaHawaiianHebrewHindiHmongHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKoreanKurdish (Kurmanji)KyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgishMacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMaoriMarathiMongolianMyanmar (Burmese)NepaliNorwegianPashtoPersianPolishPortuguesePunjabiRomanianRussianSamoanScottish GaelicSerbianSesothoShonaSindhiSinhalaSlovakSlovenianSomaliSpanishSudaneseSwahiliSwedishTajikTamilTeluguThaiTurkishUkrainianUrduUzbekVietnameseWelshXhosaYiddishYorubaZulu
Qalabka Kombiyuutarka Korontada
Mashiinka Mashiinka Dambiga
Flanges-ka 87312 SAE J516 Qalabka rakibida qalabka korontada
Iyada oo taageero xoog leh ee xirfadlayaasha aqoonta leh, waxaan awoodnaa in aan soo saaro qalab ballaaran oo flange Xanta 87312 SAE J516 Qalabka Farsamaynta rakibida hydraulics. Waxaa si qarsoodi ah loo soo saaray iyada oo la adeegsanayo farsamooyin farsamo oo la adeegsanayo qalabka tayada leh ee tayada sare leh iyada oo la raacayo hagid wax ku ool ah ee khubarada farsamada khibrada leh. Qalabka: Tijaabinta Carbon Soodhiga: Nooca Foomka: Xidid, Flanges Place ...
saqaf ka sameysan qoryaha JIC hydraulic fittings tuubo toosan oo hiddo-gashi jic haweenka dhejis
Shirkaddayadu waxay farsameeyeen farshaxanka iyagoo bixinaya biraha qudaarta ee JIC ee hirgelinta gaaska si toos ah loogu xiro macaamiisha. saqafka dhejiska ee JIC hydraulics fittings hygiinka tooska ah ee gaaska jicilka dumarka waxaa loogu talagalay oo loo dejiyey iyada oo loo eegayo baahida iyo shuruudaha macaamiisha. Qeybaha la bixiyay waxaa loo soo bandhigaa ragga ay ku kala duwan yihiin, naqshadaha, qaababka iyo ...
tuubooyinka hiddo-gaasiga ah / xirmidda hiddo-gaaseed ee qalabka korontada
Waxaan nahay ururka ugu muhiimsan ee warshadaha, oo si weyn ugu hawlan bixinta noocyada tayada ugu fiican ee tuubada huufinta / xirmidda hiddo-gaaseed ee khadadka. Qalabka hydraulic hydrolic fittings / hydraulic hose fittings ferrule waxaa si toos ah u soo saaray by xirfadlayaasha xirfad leh isticmaalaya qalabka tayada ugu fiican iyo tiknoolajiyada horumarsan. Bixinta tuubo hiddo-gabbaadeed / xirmo hiddo-gashi hindis ah ayaa aad loo qaddariyaa ...
Dumarka ORFS ku xir fiilada xirmidda farsamada gacanta
Waxaan nahay urur madax ah oo ku hawlan soo saarista iyo bixinta xirmo badan oo ah ORFS Fidiya Xirmooyinka Qalabka Dib-u-Qalinka ah ee Furka ah. Waxyaabahaas waxaa lagu soo saarey qalab wanaagsan oo tayo leh oo laga helayo dib u habeeyn iyo iibiyeyaasha lagu kalsoon yahay ee suuqa. Si loola tacaalo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, waxaanu soo bandhignaa niman ORFS oo ah feerka dibudhiska lagu xiro
70011 / 72011heelka xargaha bangiga, bsp / metrik bjjo fiilooyinka iyo xirayaasha
Waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo tayo sare leh 70011 / 72011heelka xargaha bangiga, bsp / metrik bjjo hydraulic iyo xirayaasha macaamiisheena qiimaha leh. Iyadoo ay ugu wacan tahay waxqabadkooda iyo habdhaqmeedka aan fiicnayn, kuwan 70011 / 72011hydhabka qalabaysan, bsp / metric bjjing hydraulic fittings iyo xirayaasha ayaa aad loogu baahan yahay codsiyada kala duwan ee warshadaha. Bixinta 70011 / 72011heelka dabiiciga ah, bsp / metric bjjong hydraulic fittings iyo xirayaasha ayaa lagu geliyaa gudaha ...
YH Isnexafka Dumarka 90 Gaariga Xakamaynta Dheeraadka Dharka
Our waa urur qadarin ah oo bixiya noocyo badan oo ka mid ah YH-ka Hyrikka Haweenka 90 Xakamaynta Dareemaha Ferrere. Dhammaan alaabooyinkeena waxaa lagu horumariyaa xarunteena qalabka casriga ah iyadoo la isticmaalayo qalab heer sare ah. Qalabka loo isticmaalo geedi socodka wax soo saarka waxaa laga helaa iibiyeyaasha lagu kalsoon yahay suuqa. Intaa waxaa dheer, waxaan u bixinnaa YH-ka Haweenka 90D
316 Qalab aan Dhuxul lahayn Male Metric DIN Qashinka lagu xidho
Waxaanu nahay urur madax ah kaas oo ku hawlan soo saarista iyo bixinta xirmo badan oo ah 316 Stainless Steel Male Metic DIN Qashinka lagu xiro. Waxyaabahaas waxaa lagu soo saarey qalab wanaagsan oo tayo leh oo laga helayo dib u habeeyn iyo iibiyeyaasha lagu kalsoon yahay ee suuqa. Si loo daboolo shuruudaha kala duwan ee macaamiisha, waxaan ku siineynaa 316 Stainless Steel Male Metric ...
Jicbadaha birmaalmeedyada jicka ah jic Xarig adag oo tuubada
Si loo jaangoyno booska muhiimka ah ee warshadaha, waxaan soo bandhignaa noocyo badan oo ka mid ah qalabka wax lagu rakibo ee jic ah jic Xarunta xakamaynta hiddo-gaasiga ee dabiiciga ah ee isku dheelitiran dabiiciga ah waxaana loo isticmaalaa iskaashiga korantada. Waxaan ka heleynaa dhamaan qalabka kuleyliyaha ee kaarboonka ah ee jicka ah ee ku xiran qadada xashiishka ee ka soo jeeda qandaraasyada shahaadada ee warshadaha, kuwaas oo soo saaraya sida tayada loo dajiyay ...
Xaqiijinta Xirfadaha 45 Fursadda BSP Fidiyaal Maskaxda ah
Waxaan bixinnaa noocyo kala duwan oo tayo sare leh Qalabka Xirfadaha Qalabka 45 Degmadda BSP Fidiya Masraxa ee macaamiisha qiimaha leh. Hawlgalkooda ugu fiicnaanta, iska-caabbinta korantada, nolol-maalmeed dheer iyo naqshad aan fiicnayn ayaa ka dhigaya Qalabka Xakamaynta 45 ee BSP-ka Koleejka ah ee BSP-da Faa'iidada sare ee suuqa. Iyada oo shabakadeena qaybinta ballaaran, waxaanu bixinnaa kuwan Xoojinta 45 Xidhan Qeybta BSP ...
zinc-du wuxuu xirxiray laba qalab oo isku xiran oo birta ah
Iyadoo gargaarka adag ee xirfadlayaasha aqoonta leh, waxaan awoodnaa in aan soo saaro qalab balaadhan oo zinc ah oo labajibbaaran oo isku xirta birta qalabka hirta ah. Waxaa si qarsoodi ah loo soo saaray iyada oo la adeegsanayo farsamooyin farsamo oo la adeegsanayo qalabka tayada leh ee tayada sare leh iyada oo la raacayo hagid wax ku ool ah ee khubarada farsamada khibrada leh. Nooca: Qodobbada Nambarka Tusaalaha: P90011 Magaca Brand: YH HYDRAULIC Place ...
Qoryaha birta qoryaha ee tayada sare leh iyo xirmooyinka
Waxaan calaamadeynay jagooyin kala duwan oo firfircoon oo suuqa ku yaala iyada oo la siinayo tayad sarre leh oo ah aalado qoryo leh oo tayo sare leh oo tayo sare leh. Qalabka korontada ee tayo sare leh oo tiknoolajiyo leh iyo khadadka waa la soo saaraa iyadoo la iibsanayo iibiyeyaasha dhamaadka iyada oo la adeegsanayo qalab tayo leh oo tayo fiican leh iyo tiknoolajiyada casriga ah ee raacsan xeerarka warshadaha. Intaa waxaa dheer, tani waa tayada sare ee a
90 de SAE FLANGE 3000 PSI, tuubo dhejis ah, tuubo tube
Kaba-saaridda khibrada ganacsiga, waxaan awoodnay inaan soo saarno 90 de SAE FLANGE 3000 PSI, tuubo hiddo-gaaban, qalab tuubo. Waxyaabahaas ayaa la soo saaraa iyagoo isticmaalaya aluminium heer sare ah, naxaas iyo biro oo lagu daray farsamada CNC. 90 de SAE FLANGE 3000 PSI, tuubo dhejis ah oo lagu xiro, tuubo tuubo waa ...
Dumarka Qalabka JIC oo aan lahayn qalab birta ah Hose Fittings
Waxaan soo saareynaa noocyo kala duwan oo ah Noocyada kala duwan ee JIC oo aan lahayn qalab adag Hose Fittings, Halka JIC oo aan lahayn qalab birta ah Hose Fittings waxaa loo isticmaalaa warshado kala duwan sida Automobile, Oil iyo Gas. , waxaan sidoo kale soo saareynaa Qalabka Hijraaca Jicabka JIC ee aan lahayn qalabka Hose Hose Fittings sida macaamiisha looga baahan yahay. Qalabka: Duufaan aan lahayn ...
tayada tayada qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'booms trigure'
Waxaan ka mid nahay shirkadaha si fiican loo yaqaan ee badeecadda wax soo saarka, bixinta, dhoofinta, ganacsiga. Faa'idada iyo tafaariiqda tayada tayada qalabka korontada ku shaqeeya ee loo yaqaan 'boom troors'. Kuwani waa tayada la kormeero iyadoo loo eegayo kormeerka khubarada. Kuwaas oo kale waxay qabaan waxqabad aad u sareeya iyo awood shaqo oo hufan. Intaa waxaa dheer in tani tayada wanaagsan ee qalabka korontada hufan ee banjo ...
SS304 Mucjiso Hal Cutub ah Nooca Xidhmada Hose ee Kumbiyuutarka
Waxaan nahay mid ka mid ah bixiyeyaasha la jecel yahay ee tayo sare leh SS304 Mucjoojiye Hal Cutubka Nooca Xirmada Hose-ka. Nidaamkeena SS304 Mucjiso One Piece Type Hose Qalabka loo yaqaan "Hydraulic Hose Fitting" waxaa loo yaqaanaa inay iska caabbiyaan xaaladaha aan fiicnayn, dhismaha adag, ergonomically habeyn, adkeysiga, nolosha shafka dheer iyo dhammeystiran dhammaadka. Waxaan soo saareynaa tayada ugu habboon SS304 Mucjiso One Piece Type Hose Ku rakibida ...
JIC 45 shahaadada Qalabka Kombiyuutarka Qalabka Xirmada Dheddiga 26741
Ku soo laabashada waayo-aragnimada ganacsiga hodanka ah waxaan ku hawlanahay soo saarista, dhoofinta, sumcadda iyo bixinta JIC 45 shahaadada Hoose Qalabka Kombiyuutarada 26741. Shahaadada JIC 45 ee Qalabka Xirfadaha Qalabka Ku-xirnaanta Dumarka 26741 waxaa lagu heli karaa sifooyin kala duwan si loo doorto. Tani JIC 45 shahaadada Qalabka Qalabka Kombiyuutarka Qalabka Xirfadlaha Dumarka 26741 waxaa loo soo saaraa waxyaabo tayada leh oo la ansaxiyey oo la hayo ...
Xiddigaha rakibida ee farsameysan ee farsamada gaasta ah ee xargaha gaaska leh
Waxaanu nahay mid ka mid ah magacyada la aaminsanyahay in ay bixiyaan labajibbaareyn farsameysan oo birta ah ee tuubo dhejiyaal ah oo loogu talagalay macaamiisheena qiimaha leh. Bixinta kala duwan ee rakibida labajibbaha ee farsamada gaasta ee qashinka gaaska ee qashinka lagu dhejiyo ayaa ka samaysan waxyaabo tayo sare leh. Bixin Xidhan oo lagu rakibay hawada sare ee tuubada qashinka ee qashinka ee qashinka ku jira ayaa si ballaaran loo isticmaalaa ...
YH HYDRAULIC wuxuu ku dhajiyay tuubo hudheello ah oo nooc kasta ah
Shirkadeena ayaa si weyn ugu qadarisay inay bixiso YH HYDRAULIC oo ku dhajiyay tuubo hujuumeed oo ku xiran dhammaan noocyada macaamiisha. YH HA QAYBIGA ayaa ku dhajiyay tuubo hudheel ah oo ku xiran dhamaan noocyada kala duwan ee suuqa laga soo iibsado, sababtoo ah dhismo adag, nolol dheer, dhibaatooyin xor ah iyo ka hortag udhaxeeya. Meelaha la bixiyay waxaa si weyn looga amaaney macaamiisha si ay u yeeshaan sifooyin aan la isku halleyn karin oo cajiib ah. YH ...
Qalabka Xakamaynta Kumbiyuutarka Qalabka Calaamadeysan ee Qalabka Suxfoonka Qalabka
Waxaanu nahay mid ka mid ah magacyada la aaminsanyahay in ay bixiyaan Kaaliyaha Xakamaynta Kumbiyuutarka Qalabka Qalabka Qalabka Soodhaweysan ee loogu talagalay macaamiisheena qiimaha leh. Bixinta kala duwan ee Qalabka Xakamaynta Kumbiyuutarka Qalabaynta Qalabka Qalabka Qalabka Suufiyadu wuxuu ka samaysan yahay qalabka tayo sare leh. Qalabka Hose ee Kumbuyuutarka ee la Siiyay Qalabka Dhuxul-la'aan Baaskiil-doonka ayaa si ballaaran loo isticmaalaa warshado kala duwan. Adkeysiga Hoosada Kumbiyuutarka ee Qalabka Dhuxulo ...
cadaadiska sare ee cadaadiska sare ee tuubada loo yaqaan 'Parker Standard'
Iyada oo la socodsiinayo horumarka suuqa suuqyada, waxaan ku siinaynaa noocyo badan oo heer sare ah ee cadaadiska sare ee tuubada huuriga ah ee Parker Standard.The cadaadiska sare ee cadaadiska sare ee foorjeerka Parker Standard waxaa laga soo iibsadaa iibiyeyaasha shahaadada ee suuqa si ay u hoggaansamaan caadooyinka warshadaha. tijaabi cadaadiska sare ee cadaadiska sare ee tuubada hareeraha Parker Standard oo ka soo horjeeda xarriijimo kala duwan si ...
Ku saabsan YH Hydraulic
Warshad Ningbo YH Oo Shirkadda 2003 la aasaasay warshadeeda Ningbo, Shiinaha. Dekedda ugu dhow waa dekedda Ningbo. YH Hydraulic waa warshad gaar ah oo soo saarta iyo sahay tuubooyinka hydraulka, murgutooyin hidde ah, xirxirayaasha adegyada, haadyada hidaha ah, mishiinnada hidaha, Etc.
DX68 CE STEER LOADER HOSE Mashiinka dhoobada 4 "4S 380V 400V 240V
Soodhada NPT HTT ee hiddo-gaas si dhaqsi ah
2 "YH51M mishiinka gaaska ah ee gawaarida lagu iibiyo
qalabka hydraulic hose / steel fittings
Metric Dheddig 24 Heerka O-RING Kombiyuutarka qalabka korontada oo dib loo isticmaali karo
Qiimo hoose! CE 9sets lacag la'aan ah ayaa geeriyoota qalabka isbeddel degdeg ah qalabka wax lagu xiro
Xuquuqda daabacaadda © Ningbo YH Factory Machinery | macradka | Khariidadda bogga